Servant Of The People2(2016) ##unicode ဒီတဈခေါကျမှာတော့ယူကရိနျးသမ်မတကိုယျတိုငျပါဝငျသရုပျဆောငျထားတဲ့ "Servant of the People 2" ကိုတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ ဒီကားလေးကိုတော့အထှအေထူးမိတျဆကျပေးဖို့လိုမယျမထငျပါဘူး ပထမကားမှာတုနျးကယူကရိနျးသမ်မတဇလနျစကီးရဲ့သာမနျဖြျောဖွရေေးလုပျတဲ့လူတဈယောကျအဖွဈကနေ သမ်မတတဈယောကျဖွဈသညျအထိအံ့ဩဖို့ကောငျးတဲ့ဘဝဇာတျကွောငျးကိုကွညျ့ရှုခဲ့ရပါတယျ ဒီဇာတျကားရဲ့အထောကျအပံ့ကွောငျ့ပဲလူတှရေဲ့အားပေးမှုကိုရပွီး သမ်မတနရော အထိရယူနိုငျခဲ့တာဆိုလညျးမမှားပါဘူး အခုဒီကားလေးမှာတော့သမ်မတဖွဈသှားပွီး တှကွေုံ့ရတဲ့အခကျအခဲတှကေိုဟာသလေးနှောပွီးတငျပွထားတာကိုကွညျ့ရှုရမှာပါ ဒီကားမှာဆိုရငျ ဗာဆီလီပကျထရိုဗဈ(ဇလနျစကီး)ဟာအကငျြ့ပကျြခွစားမှုတိုကျဖကျြရေးဥပဒကေို တငျသှငျးခငျြပမေယျ့ အကငျြ့ပကျြတဲ့လှတျတျောအမတျတှကေတော့ထငျတဲ့အတိုငျးလှယျလှယျလကျမခံပေးပါဘူး သမ်မတဗာဆီလီပကျထရိုဗဈတဈယောကျပဒပွေဌာနျးနိုငျဖို့ဘယျလိုကွိုးစားသှားမလဲ တားဆီးမှုတှကေိုဘယျလိုကြျောလှားသှားမလဲဆိုတာကိုတော့ဇာတျလမျးထဲမှာဆကျလကျကွညျ့ရှုပေးကွပါဦးနျော ##zawgyi ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ယူကရိန်းသမ္မတကိုယ်တိုင်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ "Servant of the People 2" ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီကားလေးကိုတော့အထွေအထူးမိတ်ဆက်ပေးဖို့လိုမယ်မထင်ပါဘူး ပထမကားမှာတုန်းကယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီးရဲ့သာမန်ဖျော်ဖြေရေးလုပ်တဲ့လူတစ်ယောက်အဖြစ်ကနေ သမ္မတတစ်ယောက်ဖြစ်သည်အထိအံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကိုကြည့်ရှုခဲ့ရပါတယ် ဒီဇာတ်ကားရဲ့အထောက်အပံ့ကြောင့်ပဲလူတွေရဲ့အားပေးမှုကိုရပြီး သမ္မတနေရာ အထိရယူနိုင်ခဲ့တာဆိုလည်းမမှားပါဘူး အခုဒီကားလေးမှာတော့သမ္မတဖြစ်သွားပြီး တွေ့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဟာသလေးနှောပြီးတင်ပြထားတာကိုကြည့်ရှုရမှာပါ ဒီကားမှာဆိုရင် ဗာဆီလီပက်ထရိုဗစ်(ဇလန်စကီး)ဟာအကျင့်ပျက်ခြစားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေကို တင်သွင်းချင်ပေမယ့် အကျင့်ပျက်တဲ့လွှတ်တော်အမတ်တွေကတော့ထင်တဲ့အတိုင်းလွယ်လွယ်လက်မခံပေးပါဘူး သမ္မတဗာဆီလီပက်ထရိုဗစ်တစ်ယောက်ပဒေပြဌာန်းနိုင်ဖို့ဘယ်လိုကြိုးစားသွားမလဲ တားဆီးမှုတွေကိုဘယ်လိုကျော်လွှားသွားမလဲဆိုတာကိုတော့ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော် Review – Phyu Sin File Size – 1GB,2GB Format…mp4 Quality : 720p,1080p Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin Encoded by Arrow ========================================================================= GDtot လင့်ဒေါင်းနည်း (အစိမ်းပြထားတာကိုကလစ်ပါ) GDtot (uc browser ကိုသုံးရငျပိုကောငျးပါတယျ) Mega.nz Link ဒေါငျးနညျး Gdrive Link ဒေါငျးနညျး
Loki7(2016) ##unicode ဒီကားလေးထဲမှာတော့ အရမျးကိုခငျမငျကွတဲ့ ပွောမနာဆိုမနာ ဘောဒါ ၇ ယောကျရှိပါတယျ။ သူတို့အားလုံး ကိုယျ့အလုပျကိုယျစီနဲ့ တညျငွိမျနကွေပမေဲ့ အယျဗရိုဆိုတဲ့တဈယောကျကတော့ ရရစားစားနဲ့ ပွဿနာလညျးအရမျးရှာတတျတဲ့ကောငျ။ သူတို့ဘျောဒါတှထေဲက တျောရိုတိုဆိုတဲ့တဈယောကျက လကျဝှခေ့နျြပီယံ။ တဈနသေူ့လကျဝှပှေဲ့မှာ အယျဗရိုက ဒီကောငျရှုံးအောငျတဈနညျးနညျးနဲ့ကွံပေးမယျဆိုပွီး သူ့တို့ဘျောဒါထဲကတဈယောကျဖွဈတဲ့ ဒီရတျသရီရဲ့ဘားကိုပေါငျပွီး တျောရိုတိုရဲ့ပွိုငျဘကျဘကျကနေ ကွေးကွီးကွီးလောငျးလိုကျတယျ။ ပွိုငျခါနီးမှာလညျး တျောရိုတိုသောကျမယျ့ရထေဲကို ဆေးခတျလိုကျတယျ။ ဒါပမေဲ့ စီစဉျထားသလိုဖွဈမလာဘဲ တျောရိုတိုကအနိုငျရသှားတဲ့အခါ ဒီရတျသရီရဲ့ဘားကို အဆုံးခံရတော့မယျ့ကိနျးဆိုကျလာပါတော့တယျ။ အဲ့မှာပဲ အယျဗရိုတဈယောကျအကွံထုတျရငျး သူ့ဘျောဒါပနျးခြီဆရာ ပုံတူပနျးခြီဆှဲပေးနတေဲ့ သူဌေးကွီးကိုမကျြစိကသြှားပွီး ခဉျြးကပျပါတော့တယျ။ အယျဗရိုနဲ့ ဘျောဒါတဈစု ကွှေးရှငျတှကေို အခြိနျမီငှပွေနျဆပျနိုငျမလား၊ ဘယျလိုပေါကျကရဖွဈရပျတှနေဲ့ ၂ ပါးသှားကွမလဲဆိုတာကို အခှီတလိုငျးနဲ့ကွညျ့ရှုကွရမှာပါ။ ##zawgyi ဒီကားလေးထဲမှာတော့ အရမ်းကိုခင်မင်ကြတဲ့ ပြောမနာဆိုမနာ ဘောဒါ ၇ ယောက်ရှိပါတယ်။ သူတို့အားလုံး ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်စီနဲ့ တည်ငြိမ်နေကြပေမဲ့ အယ်ဗရိုဆိုတဲ့တစ်ယောက်ကတော့ ရရစားစားနဲ့ ပြဿနာလည်းအရမ်းရှာတတ်တဲ့ကောင်။ သူတို့ဘော်ဒါတွေထဲက တော်ရိုတိုဆိုတဲ့တစ်ယောက်က လက်ဝှေ့ချန်ပီယံ။ တစ်နေ့သူ့လက်ဝှေ့ပွဲမှာ အယ်ဗရိုက ဒီကောင်ရှုံးအောင်တစ်နည်းနည်းနဲ့ကြံပေးမယ်ဆိုပြီး သူ့တို့ဘော်ဒါထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဒီရတ်သရီရဲ့ဘားကိုပေါင်ပြီး တော်ရိုတိုရဲ့ပြိုင်ဘက်ဘက်ကနေ ကြေးကြီးကြီးလောင်းလိုက်တယ်။ ပြိုင်ခါနီးမှာလည်း တော်ရိုတိုသောက်မယ့်ရေထဲကို ဆေးခတ်လိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ စီစဉ်ထားသလိုဖြစ်မလာဘဲ တော်ရိုတိုကအနိုင်ရသွားတဲ့အခါ ဒီရတ်သရီရဲ့ဘားကို အဆုံးခံရတော့မယ့်ကိန်းဆိုက်လာပါတော့တယ်။ အဲ့မှာပဲ အယ်ဗရိုတစ်ယောက်အကြံထုတ်ရင်း သူ့ဘော်ဒါပန်းချီဆရာ ပုံတူပန်းချီဆွဲပေးနေတဲ့ သူဌေးကြီးကိုမျက်စိကျသွားပြီး ချဉ်းကပ်ပါတော့တယ်။ ...
Beauty and the Best (2016) ##unicode Beauty and the Best ဇာတျကားကတော့ Indo Highschool ဇာတျကားလေးဘဲဖွဈပါတယျ။ Iraက ရုပျခြောမောတဲ့လူဖွဈပွီးတော့ Miss ပွိုငျပှဲမှာအနိုငျရကာ Modelအဖွဈလုပျကိုငျနသေူဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ သူကကြောငျးစာမှာတော့ ထူးခြှနျတဲ့လူမဟုတျပါဘူး။ Kellyကတော့ မိခငျရဲ့ ဆေးကြောငျးတကျစခေငျြတဲ့ ဆန်ဒကွောငျ့ စာကွိုးစားပွီး ကြောငျးမှာထိပျဆုံးအဆငျ့အမွဲရှိနတေဲ့သူပေါ့။ တဈနမှေ့ာတော့ စာမလုပျတဲ့Iraရဲ့အမှတျက ကံကောငျးပွီးKellyထကျကြျောသှားတဲ့အခါ Kellyက Iraကို ခိုးခတြယျလို့စှပျစှဲခဲ့ပါတယျ။သူခိုးမခခြဲ့ကွောငျးကို သကျသပွေဖို့အတှကျ Iraတဈယောကျက နှဈဝကျစာမေးပှဲမှာ Kellyကိုအနိုငျယူပွရမဲ့ စိနျချေါမှုကိုလကျခံလိုကျပါတယျ။ လကျတှမှေ့ာတော့ Iraက Modelအလုပျတှနေဲ့မအားမလပျဖွဈနတောကွောငျ့ စာမလုပျဖွဈတဲ့လူဖွဈနတောမို့ Kellyကိုအနိုငျယူဖို့ နညျးလမျးရှာမတှခေဲ့ပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ ကြောငျးက Kellyရဲ့ ဝမျးကှဲဖွဈတဲ့ စာအတျောဆုံးAladoကို သူ့ကိုစာသငျပေးဖို့အကူအညီတောငျးဖို့ကွိုးစားပါတော့တယျ။ အေးအေးဆေးဆေးနတေတျတဲ့ Aladoတဈယောကျ မိနျးမခြောလေး Iraရဲ့တောငျးဆိုမှုကိုလကျခံမလား။ Iraရော Kellyကိုအနိုငျယူနိုငျပါ့မလားဆိုတာ ကွညျ့ရှုကွပါအုံး။ ##zawgyi Beauty and the Best ဇာတ်ကားကတော့ Indo Highschool ဇာတ်ကားလေးဘဲဖြစ်ပါတယ်။ Iraက ရုပ်ချောမောတဲ့လူဖြစ်ပြီးတော့ Miss ပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရကာ Modelအဖြစ်လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူကကျောင်းစာမှာတော့ ထူးချွန်တဲ့လူမဟုတ်ပါဘူး။ Kellyကတော့ မိခင်ရဲ့ ဆေးကျောင်းတက်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒကြောင့် စာကြိုးစားပြီး ကျောင်းမှာထိပ်ဆုံးအဆင့်အမြဲရှိနေတဲ့သူပေါ့။ တစ်နေ့မှာတော့ စာမလုပ်တဲ့Iraရဲ့အမှတ်က ...
IMDB: 6.5/10 5247 votes
Road To High & Low (2016) ##unicode ဒီကားကတော့ High & Low movie ပထမဆုံးကားပါ ကနျြကားအကုနျလုံးကိုလဲတငျထားပေးပါတယျ ဒီကားလေးလဲကနျြနသေေးတော့ ဘာသာပွနျတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ ဇာတျလမျးအကဉျြး ကျောဘရာ ယာမာတိုနဲ့ နိုဘိုရူတို့သုံးယောကျဟာ ငယျငယျကတညျးကအရမျးခငျအရမျးခဈြကွတဲ့ သူငယျခငျြးသုံးယောကျဖွဈပါတယျ ကျောဘရာနဲ့ယာမာတိုဟာလူဆိုးဂိုဏျးဝငျတှဖွေဈကွပမေယျ့ နိုဘိုရူကတော့ရညျမှနျးခကျြရှိတဲ့သူတဈဦးဖွဈပွီးတော့ လူတှကေိုကာကှယျပေးနိုငျတဲ့ရှနေ့တေဈယောကျဖွဈခငျြတာပါ ဒါပမေယျ့တဈနမှေ့ာနိုဘိုရူရဲ့ကောငျမလေးမီဟိုဟာအုပျစုတဈခုရဲ့မကောငျးကွံခွငျးကိုခံလိုကျရပွီး ကိုယျ့ကိုကိုယျသတျသသှေားပါတယျ နိုဘိုရူဟာသူ့ကောငျမလေးကိုသစေတေဲ့သူတှနေဲ့ ပွဿနာတကျရငျးထောငျကသြှားပါတယျ အိပျမကျတှပေကျြဆီးသှားပွီးတော့ နောကျဆုံးမှာသူလညျးကာရူဆိုတဲ့လူဆိုးအဖှဲ့ထဲကိုရောကျသှားပါတယျ ကာရူအဖှဲ့အမိနျ့အရ နိုဘိုရူဟာသူ့သူငယျခငျြးနှဈယောကျရဲ့ဂိုဏျးကိုဖကျြဆီးရတော့မယျ့ အခါမှာတော့........ သူငယျခငျြးသုံးယောကျ နောကျဆုံးမှာရနျသူတှပေဲဖွဈသှားကွမလား သူငယျခငျြးဆကျဆံရေးကိုဆကျပွီးထိနျး ထားနိုငျပါ့မလား ဆိုတာကိုဇာတျလမျးထဲမှာဆကျလကျကွညျ့ရှုလိုကျကွပါဦး ##zawgyi ဒီကားကတော့ High & Low movie ပထမဆုံးကားပါ ကျန်ကားအကုန်လုံးကိုလဲတင်ထားပေးပါတယ် ဒီကားလေးလဲကျန်နေသေးတော့ ဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း ကော်ဘရာ ယာမာတိုနဲ့ နိုဘိုရူတို့သုံးယောက်ဟာ ငယ်ငယ်ကတည်းကအရမ်းခင်အရမ်းချစ်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းသုံးယောက်ဖြစ်ပါတယ် ကော်ဘရာနဲ့ယာမာတိုဟာလူဆိုးဂိုဏ်းဝင်တွေဖြစ်ကြပေမယ့် နိုဘိုရူကတော့ရည်မှန်းချက်ရှိတဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့ လူတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ရှေ့နေတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တာပါ ဒါပေမယ့်တစ်နေ့မှာနိုဘိုရူရဲ့ကောင်မလေးမီဟိုဟာအုပ်စုတစ်ခုရဲ့မကောင်းကြံခြင်းကိုခံလိုက်ရပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ်သတ်သေသွားပါတယ် နိုဘိုရူဟာသူ့ကောင်မလေးကိုသေစေတဲ့သူတွေနဲ့ ပြဿနာတက်ရင်းထောင်ကျသွားပါတယ် အိပ်မက်တွေပျက်ဆီးသွားပြီးတော့ နောက်ဆုံးမှာသူလည်းကာရူဆိုတဲ့လူဆိုးအဖွဲ့ထဲကိုရောက်သွားပါတယ် ကာရူအဖွဲ့အမိန့်အရ နိုဘိုရူဟာသူ့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရဲ့ဂိုဏ်းကိုဖျက်ဆီးရတော့မယ့် အခါမှာတော့........ သူငယ်ချင်းသုံးယောက် နောက်ဆုံးမှာရန်သူတွေပဲဖြစ်သွားကြမလား သူငယ်ချင်းဆက်ဆံရေးကိုဆက်ပြီးထိန်း ထားနိုင်ပါ့မလား ဆိုတာကိုဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦး Review – Phyu Sin File Size – 1.2GB Format…mp4 Quality : 1080p Blu-ray Duration… 1h 35min Genre : Action, Drama Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin Encoded by Arrow
Tam Cam: The Untold Story (2016) ##unicode ဒီတဈခေါကျတငျဆကျပေးမှာကတော့ ဗီယကျနမျ နနျးတှငျးကားလေးဖွဈပါတယျ မငျးသားလေး ဟောငျးလူ ဟာတိုငျးပွညျကိုလှဲပွောငျးယူဖို့ အမတျတှရေဲ့ဖိအားကွောငျ့ မိဖုရားရှေးခယျြတငျမွောကျဖို့အရေးဖွဈလာပါတယျ ဒါကွောငျ့အဆငျ့အတနျးမြိုးစုံတကျရောကျဖို့ ပှဲတျောစီစဉျပွီး မိဖုရားရှေးခယျြဖို့စီစဉျပါတယျ မွို့တျောနဲ့မလှမျးမကမျးက မိထှေးနဲ့နရေတဲ့ တနျဆိုတဲ့မိနျးမပြိုလေးကလဲ ပှဲတျောကိုတကျရောကျခငျြနပေါတယျ ဒါပမေယျ့မိထှေးရဲ့ နှိပျစကျမှုတှကွေောငျ့ဘယျလိုမှ သှားမရဖွဈနပေမေယျ့ ကူညီသူတှကွေောငျ့ပှဲတျောကိုရောကျခဲ့ပါတယျ ပှဲတျောကိုရောကျပွီးမငျးသားလေးနဲ့ ဖူးစာဆုံရမှာလား အခဈြဇာတျလမျးလေးအပွငျ အာဏာလုပှဲတှနေဲ့လောဘအာဃတတရားတှပေါ ရိုကျပွထားတဲ့ နနျးတှငျးမှျောအကျရှငျ ကားကောငျးလေးကို ကွညျ့ရှုလိုကျပါဦးရှငျ့ ##zawgyi ဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ ဗီယက်နမ် နန်းတွင်းကားလေးဖြစ်ပါတယ် မင်းသားလေး ဟောင်းလူ ဟာတိုင်းပြည်ကိုလွဲပြောင်းယူဖို့ အမတ်တွေရဲ့ဖိအားကြောင့် မိဖုရားရွေးချယ်တင်မြောက်ဖို့အရေးဖြစ်လာပါတယ် ဒါကြောင့်အဆင့်အတန်းမျိုးစုံတက်ရောက်ဖို့ ပွဲတော်စီစဉ်ပြီး မိဖုရားရွေးချယ်ဖို့စီစဉ်ပါတယ် မြို့တော်နဲ့မလှမ်းမကမ်းက မိထွေးနဲ့နေရတဲ့ တန်ဆိုတဲ့မိန်းမပျိုလေးကလဲ ပွဲတော်ကိုတက်ရောက်ချင်နေပါတယ် ဒါပေမယ့်မိထွေးရဲ့ နှိပ်စက်မှုတွေကြောင့်ဘယ်လိုမှ သွားမရဖြစ်နေပေမယ့် ကူညီသူတွေကြောင့်ပွဲတော်ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ် ပွဲတော်ကိုရောက်ပြီးမင်းသားလေးနဲ့ ဖူးစာဆုံရမှာလား အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးအပြင် အာဏာလုပွဲတွေနဲ့လောဘအာဃတတရားတွေပါ ရိုက်ပြထားတဲ့ နန်းတွင်းမှော်အက်ရှင် ကားကောင်းလေးကို ကြည့်ရှုလိုက်ပါဦးရှင့် Review – ACP File Size – 1.6GB Format…mp4 Quality : 1080p WEB-DL Duration…1h 56min Genre : Action, Drama, Fantasy Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by ...
The Darkness (2016) ##unicode ဇာတျလမျးအကဉျြး ပီတာတလောနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုဟာ သူငယျခငျြးမိသားစုနဲ့အတူ Grand Canyon လို့ချေါတဲ့နရောကိုခရီးထှကျလာခဲ့တယျ ပီတာ့မှာ စတပျဖနီလိုချေါတဲ့သမီးတဈယောကျနဲ့ မိုကျကယျလို့ချေါတဲ့အျောတဈဇငျရောဂါခံစားနရေတဲ့သားတဈယောကျရှိပါတယျ မိုကျကယျဟာထိုခရီးစဉျအတှငျးမှာ ထူးဆနျးတဲ့ကြောကျတုံးတှကေို ကောကျရခဲ့ပွီးအိမျကိုသယျလာရာကနေ ပွသနာစတငျခဲ့တာပါ မိုကျကယျရဲ့အမဘေရှနျနီက အိမျမှာထူးဆနျးတာတှဖွေဈလာတာကိုသတိထားမိလာပွီး သူ့သားရဲ့အပွုအမူတှကေလညျးထိတျလနျ့ဖှယျ ပွောငျးလဲလာတာကိုသတိထားမိခဲ့ပါတယျ အဲ့တာကွောငျ့သူ့ယောကျြားကိုအိမျမှာမူမမှနျတဲ့အရာတဈခုရှိနကွေောငျးအသိပေးခဲ့ပမေယျ့ သူ့ယောကျြားကတော့မယုံကွညျခဲ့ပါဘူး အဲ့ဒီနောကျတဈရကျပွီးတဈရကျအိမျအတှငျးမှာထူးဆနျးတဲ့ဖွဈရပျတှဆေကျတိုကျဖွဈလာတဲ့အခါမှာတော့ ပီတာတို့မိသားစုတှေ နောကျဆုံးအထိဘေးရနျကငျးကငျးနဲ့ ကွောကျရှံ့ဖှယျအဖွဈအပကျြတှနေောကျကအဖွကေိုရှာနိုငျမလားစိတျဝငျစားဖှယျကွညျ့ရှုရမှာပါ ##zawgyi ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း ပီတာတေလာနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုဟာ သူငယ်ချင်းမိသားစုနဲ့အတူ Grand Canyon လို့ခေါ်တဲ့နေရာကိုခရီးထွက်လာခဲ့တယ် ပီတာ့မှာ စတပ်ဖနီလိုခေါ်တဲ့သမီးတစ်ယောက်နဲ့ မိုက်ကယ်လို့ခေါ်တဲ့အော်တစ်ဇင်ရောဂါခံစားနေရတဲ့သားတစ်ယောက်ရှိပါတယ် မိုက်ကယ်ဟာထိုခရီးစဉ်အတွင်းမှာ ထူးဆန်းတဲ့ကျောက်တုံးတွေကို ကောက်ရခဲ့ပြီးအိမ်ကိုသယ်လာရာကနေ ပြသနာစတင်ခဲ့တာပါ မိုက်ကယ်ရဲ့အမေဘရွန်နီက အိမ်မှာထူးဆန်းတာတွေဖြစ်လာတာကိုသတိထားမိလာပြီး သူ့သားရဲ့အပြုအမူတွေကလည်းထိတ်လန့်ဖွယ် ပြောင်းလဲလာတာကိုသတိထားမိခဲ့ပါတယ် အဲ့တာကြောင့်သူ့ယောက်ျားကိုအိမ်မှာမူမမှန်တဲ့အရာတစ်ခုရှိနေကြောင်းအသိပေးခဲ့ပေမယ့် သူ့ယောက်ျားကတော့မယုံကြည်ခဲ့ပါဘူး အဲ့ဒီနောက်တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက်အိမ်အတွင်းမှာထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဆက်တိုက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့ ပီတာတို့မိသားစုတွေ ​နောက်ဆုံးအထိဘေးရန်ကင်းကင်းနဲ့ ကြောက်ရွံ့ဖွယ်အဖြစ်အပျက်တွေနောက်ကအဖြေကိုရှာနိုင်မလားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမှာပါ Review – Phyu Sin File Size – 991MB Format…mp4 Quality : 720p WEB-DL Duration…1h 32min Genre : Horror, Thriller Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin Encoded by Arrow
IMDB: 4.4/10 14,462 votes
Dance with Me (2016) ##unicode Dance with Me ဇာတျကားမှာတော့ Katyaဆိုတဲ့ကောငျမလေးက ရှေးဟောငျးသုသသေန ပညာရှငျ သူမအဖလေိုမြိုး ရှေးဟောငျးပစ်စညျးတှကေိုစိတျဝငျစားသူဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ သူမအမကေ သူမတို့မငျးသမီးမြိုးရိုးလိုမြိုး Katyaကို မငျးသမီးလုပျစခေငျြတာကွောငျ့ နာမညျကွီးဒါရိုကျတာ Lucaရဲ့လူရှေးပှဲကို သှားဖွခေိုငျးခဲ့ပါတယျ။ လူရှေးပှဲမှာ ဇာတျဆောငျမငျးသား အကသမားတဈယောကျဖွဈတဲ့ Nikitaရဲ့ အကူအညီနဲ့ ဇာတျဆောငျမငျးသမီးနရောကို ရယူနိုငျခဲ့ပါတယျ။အကသမားNikitaက သူတို့အကအဖှဲ့နာမညျကွီးအောငျကွိုးစားနတေဲ့သူဖွဈပွီး ကောငျမလေးတှထေညျလဲတှဲတဲ့ လူရှုပျတဈယောကျလဲဖွဈပါတယျ။ ဇာတျကားရိုကျနရေငျး Katyaနဲ့ Nikitaတို့ခဈြမိသှားခဲ့သလို ဒါရိုကျတာ Lucaကလဲ Katyaကိုသဘောကသြှားခဲ့တယျ။ Katyaအမကေ စီးပှားရေးခကျခဲမှုကွောငျ့ ခမျြးသာတဲ့ ဒါရိုကျတာ Lucaနဲ့Katyaအဆငျပွဖေို့တိုကျတှနျးခဲ့ပွီးတော့ Nikitaနဲ့ဆကျဆံရေးကို သဘောမတူခဲ့ပါဘူး။ Katyaတဈယောကျ သူမအမသေဘောတူတဲ့ Lucaကိုဘဲရှေးခယျြမလား အနာဂတျခိုငျခိုငျမာမာ မရှိတဲ့ Nikitaကိုဘဲရှေးခယျြမလားဆိုတာ စိတျဝငျတစားကွညျ့ရှုရမဲ့ကားလေးပါ။ ##zawgyi Dance with Me ဇာတ်ကားမှာတော့ Katyaဆိုတဲ့ကောင်မလေးက ရှေးဟောင်းသုသေသန ပညာရှင် သူမအဖေလိုမျိုး ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူမအမေက သူမတို့မင်းသမီးမျိုးရိုးလိုမျိုး Katyaကို မင်းသမီးလုပ်စေချင်တာကြောင့် နာမည်ကြီးဒါရိုက်တာ Lucaရဲ့လူရွေးပွဲကို သွားဖြေခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ လူရွေးပွဲမှာ ဇာတ်ဆောင်မင်းသား အကသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Nikitaရဲ့ အကူအညီနဲ့ ဇာတ်ဆောင်မင်းသမီးနေရာကို ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အကသမားNikitaက သူတို့အကအဖွဲ့နာမည်ကြီးအောင်ကြိုးစားနေတဲ့သူဖြစ်ပြီး ကောင်မလေးတွေထည်လဲတွဲတဲ့ လူရှုပ်တစ်ယောက်လဲဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်ကားရိုက်နေရင်း Katyaနဲ့ Nikitaတို့ချစ်မိသွားခဲ့သလို ...
Cagefighter: Worlds Collide Cagefighter: Worlds Collide(2020) မဝေယျသာနဲ့ ကျောနာမကျဂရဂေျေါတို့ ထိုးသတျတဲ့ပှဲဆိုရငျ တျောတျောမြားမြားသိကွပါလိမျ့မယျ မဝေယျသာဟာ Boxing သမားပါ…Boxing ကရှငျးတယျ…ခါးပတျအပျေါပိုငျးကိုပဲ တိုကျခိုကျလို့ရမယျ.. .လကျသီးနဲ့ပဲထိုးလို့ရမယျ…ဒူးတှေ တံတောငျတှေ ခေါငျးတှေ ခွထေောကျတှေ ဘာမှပါမရဘူး… ကျောနာကတြော့ MMA သမား…MMA က အကုနျရောထားတာ.. .ခေါငျးနဲ့တိုကျတာတှေ မှောကျနတေုနျးမကနျရတာတှဘောတှကေလှဲရငျ ကှနျဖူးတတျရငျ ကှနျဖူးနဲ့ခြ. ..သိုငျးပွောငျးပွနျတတျရငျ သိုငျးပွောငျးပွနျနဲ့ခြ…အကုနျခလြို့ရတယျ အဲ့မှာမှ အဲ့လိုစညျးမဉျြးစညျးကမျးမတူတဲ့နယျပယျနှဈခုက ဖိုကျတာနှဈယောကျကို ပွိုငျပှဲလုပျပေးလိုကျတော့ ပရိသတျတှရေူးပွီလေ. ..ဒါမြိုးပှဲအကုနျကွညျ့ခငျြကွတာပေါ့ ဒီကားမှာလညျး ထူးမခွားနားပဲ MMA နဲ့ AEW(WWE လိုမြိုး) ကို စငျပျေါမှာပေးတှလေို့ကျတယျ… The Rock တို့ John Cena တို့ဆိုရငျ သိကွမှာပါ…သူတို့က WWE သမားတှေ. ..မွနျမာကလူတခြို့ရော ကမ်ဘာကလူတခြို့ကပါ လုပျပှဲတှေ၊ သရုပျဆောငျတာတှလေို့ ဝဖေနျနကွေတဲ့နယျပယျတဈခုကပေါ့ MMA ကတော့ အတညျခတြယျ ဆျောတယျ ခြိုးတယျ ကှဲတယျလို့ အမြားလကျခံထားကွတဲ့နယျပယျ… အောငျလအနျဆိုငျးတို့ ONE Championship မှာ ခသြလိုမြိုးပေါ့ အဲ့လိုမတူကှဲပွားတဲ့နယျပယျနှဈခုက ဖိုကျတာကွီးတှကေိုပေးတှလေို့ကျတော့ ပှဲမစခငျကတညျးက အငျတာနကျပျေါမှာ ဖနျအခငျြးခငျြးကြိတျနပွေီဆိုတာမြိုးတှဖွေဈကုနျတာပေါ့… ဇာတျလမျး ရှယျဗငျြး ..ရှယျကွမျး….သရုပျဆောငျတှကေလညျး John Moxley ...
Zulfiqar (2016) unicode ဒီတဈခေါကျကားလေးကတော့ အိန်ဒိယနိုငျငံကဆငျဒီကိတျဆိုတဲ့ဂိုဏျးခေါငျးဆောငျဇူလျဖီကာအကွောငျးနဲ့ ဂိုဏျးတှကွေားထဲကပဋိပက်ခအကွောငျးဖွဈပါတယျ။ အိန်ဒိယနိုငျငံရဲ့နရောတဈခြို့မှာဆငျဒီကိတျဆိုတဲ့အဖှဲ့တှရှေိပါတယျ။ ဆငျဒီကိတျတှကေ မကောငျးမှုဒုစရိုကျလုပျတဲ့အဖှဲ့ဖွဈပွီး အဲ့ထဲကတဈယောကျယောကျနာမညျကွီးသှားရငျအပွတျရှငျးတတျကွပါတယျ။ ဇူလျဖီကာဆိုတဲ့လူတဈယောကျကလူတိုငျးကိုကူညီပွီးအဖှဲ့သားတှအေတှကျအနဈနာခံတဲ့အတှကျနာမညျကွီးလာခဲ့ပါတယျ။ အခြိနျတှကွောလာတာနဲ့အမြှပဋိပက်ခတှဖွေဈလာတဲ့အခါ ဇူလျဖီကာနဲ့ညီအဈကိုလိုခငျရတဲ့အဖှဲ့သားတှကွေားဘယျလိုသှေးကှဲလာမလဲဆိုတာ ရငျခုနျစှာကွညျ့ရှုရမယျ့ကားလေးဖွဈပါတယျ။ zawgyi ဒီတစ်ခေါက်ကားလေးကတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံကဆင်ဒီကိတ်ဆိုတဲ့ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်ဇူလ်ဖီကာအကြောင်းနဲ့ ဂိုဏ်းတွေကြားထဲကပဋိပက္ခအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့နေရာတစ်ချို့မှာဆင်ဒီကိတ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေရှိပါတယ်။ ဆင်ဒီကိတ်တွေက မကောင်းမှုဒုစရိုက်လုပ်တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး အဲ့ထဲကတစ်ယောက်ယောက်နာမည်ကြီးသွားရင်အပြတ်ရှင်းတတ်ကြပါတယ်။ ဇူလ်ဖီကာဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ကလူတိုင်းကိုကူညီပြီးအဖွဲ့သားတွေအတွက်အနစ်နာခံတဲ့အတွက်နာမည်ကြီးလာခဲ့ပါတယ်။ အချိန်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှပဋိပက္ခတွေဖြစ်လာတဲ့အခါ ဇူလ်ဖီကာနဲ့ညီအစ်ကိုလိုခင်ရတဲ့အဖွဲ့သားတွေကြားဘယ်လိုသွေးကွဲလာမလဲဆိုတာ ရင်ခုန်စွာကြည့်ရှုရမယ့်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ Review – Nay Chi Wint Wah Khine File Size – 1.3GB Format…mp4 Quality : 720p Duration… 2h 19min Genre :Crime, Drama, Thriller Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Nay Chi Wint Wah Khine Encoded by Arrow
Adult Life Skills Adult Life Skills (2016) သူမရဲ့အမြွှာအစ်ကိုဖြစ်သူ သေဆုံးမှုကြောင့် အန်နာဆိုတဲ့ကောင်မလေးဟာ စိတ်ဓာတ်တွေကျပြီး အတိတ်ကနေ ရုန်းမထွက်နိုင်ဖြစ်နေပါတယ် သူမရဲ့အမေက အန်နာ စိတ်ပြန်လှည်လာနိုင်ဖို့ အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် မထူးခဲ့ပါဘူး အဲ့လိုခေါင်းမာလွန်းလှတဲ့အန်နာဟာ ထူးဆန်းတဲ့ ကလေးလေးတစ်ယောက်နဲ့ ဆုံခဲ့ရပါတယ် အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ … အန်နာသူ့ကိုယ်သူပြန်တည်ဆောက်နိုင်ပါ့မလား ဘယ်လိုအလွဲတွေကိုကြုံရဦးမလဲဆိုတာကိုတော့… ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဇာတ်ကားလေးဆိုပေမယ့် သဘောကျစရာအချက်လေးတွေကတော့တော်တော်များပါတယ် အလျှင်းသင့်သလို ဟာသလေးတွေကိုလည်း ထည့်ပေးထားတာမို့ ကြည့်ပျော်စေမယ့် ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားပါပဲ ။
IMDB: 6.2/10 3,091 votes
IMDB: 5.7/10 169 votes
Killer: Number7(2016) ##unicode ဒီတဈခေါကျမှာတော့ ဗီယကျနမျ အကျရှငျကားလေးတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျရှငျ့ ဇာတျလမျးအကြဥင်္းကတော့ သူဌေး ဟူနနျ‌ဒိုငျ ဆိုသူက သူရဲ့ကုမ်ပဏီက စီးပှားရေးလုပျငနျးတှကေ ဟနျပွသာဖွဈပွီး မှောငျခိုကူးတဲ့လုပျငနျးကိုတှငျတှငျကယျြကယျြ နဲ့လုပျကိုငျသူတဈဦးပါ ရဲတှဟောလဲ သူ့ရဲ့‌အကွောငျးတှကေို သိရကျနဲ့ သကျသမေခိုငျလုံဝာာကွောငျ့ ဖမျးဖို့ အငျမတနျကိုကွိုးစားနကွေတာပါ ဒီလိုနဲ့ ဟူနနျ‌ဒိုငျ ဟာတဈနတေ့ော့ လုပျကွံခံရပါတော့တယျ လုပျကွံတဲ့အဖှဲ့အစညျးကတော့ နိုငျငံတကာမှာအရမျးနာမညျကွီးတဲ့ လူသတျဂိုဏျးတဈခုဖွဈပွီး လုပျကွံသူကတော့ Killer NO7ဆိုတဲ့မိနျးမငယျလေးပါ ဒါပမေယျ့ လုပျကွံမှုမအောငျမွငျတဲ့အတှကျ သူဟာအန်တရာယျမကငျးပါဘူး ဒီလိုနဲ့ မှောငျခိုဂိုဏျးနဲ့ လူသတျဂိုဏျးကွား ပရိပက်ခတှနေဲ့ ရဲတှနေဲ့အားပွိုငျမှုကို ကွညျ့ရမယျ လကျမလှတျသငျ့တဲ့ အကျရှငျကားလေးပဲဖွဈပါတယျ ##zawgyi ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ဗီယက်နမ် အက်ရှင်ကားလေးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့် ဇာတ်လမ်းအကျဥင်္းကတော့ သူဌေး ဟူနန်‌ဒိုင် ဆိုသူက သူရဲ့ကုမ္ပဏီက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေက ဟန်ပြသာဖြစ်ပြီး မှောင်ခိုကူးတဲ့လုပ်ငန်းကိုတွင်တွင်ကျယ်ကျယ် နဲ့လုပ်ကိုင်သူတစ်ဦးပါ ရဲတွေဟာလဲ သူ့ရဲ့‌အကြောင်းတွေကို သိရက်နဲ့ သက်သေမခိုင်လုံဝာာကြောင့် ဖမ်းဖို့ အင်မတန်ကိုကြိုးစားနေကြတာပါ ဒီလိုနဲ့ ဟူနန်‌ဒိုင် ဟာတစ်နေ့တော့ လုပ်ကြံခံရပါတော့တယ် လုပ်ကြံတဲ့အဖွဲ့အစည်းကတော့ နိုင်ငံတကာမှာအရမ်းနာမည်ကြီးတဲ့ လူသတ်ဂိုဏ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး လုပ်ကြံသူကတော့ Killer NO7ဆိုတဲ့မိန်းမငယ်လေးပါ ဒါပေမယ့် လုပ်ကြံမှုမအောင်မြင်တဲ့အတွက် သူဟာအန္တရာယ်မကင်းပါဘူး ဒီလိုနဲ့ မှောင်ခိုဂိုဏ်းနဲ့ လူသတ်ဂိုဏ်းကြား ပရိပက္ခတွေနဲ့ ...
Sadako vs. Kayako Horror ပရိသတ်တော်တော်များများက ရုံတင်သွားတဲ့ The Rings ဆိုတဲ့ ကားကိုကြည့်ဖူးကြမှာပါ အခုမိတ်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်ကားလေးက The Rings နဲ့ နည်းနည်းဆင်တယ်ဗျ ကျိ်န်စာသင့်နေတယ်လို့ပြောကြတဲ့ Video ကို ကြည့်လိုက်မိရင် နောက်၂ရက်ကြာရင် ကြည့်မိတဲ့သူတွေက ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဆုံးစီရင်သွားကြတယ်လို့ အယုံအကြည်ရှိကြတယ် တစ်နေ့တော့ ကျောင်းသူလေး၂ယောက်က တိပ်ခွေကို DVD ပြောင်းကူးဖို့ Video Player အဟောင်းတစ်လုံးကိုဝယ်လိုက်ကြတယ် အဲ့ player ထဲမှာ သူတို့ပြောတဲ့အခွေပါလာတယ် အစတော့ သူငယ်ချင်း၂ယောက်မသိဘဲကြည့်မိလိုက်တယ် ကြည့်ပြီးသွားတော့မှ ကျိန်စာသင့်တဲ့ခွေမှန်းသိသွားတော့ သူတို့ကျိန်စာကနေလွတ်မြောက်ဖို့နည်းလမ်းလိုက်ရှာကြပါတော့တယ် သူတို့ ကျိန်စာကနေလွတ်မြောက်နိုင်မလား မလွတ်နိုင်ဘူးလားဆိုတာတော့ ပရိသတ်ကြီးဆက်ပြီးအဖြေရှာကြပါနော် ????
IMDB: 5.1/10 2,754 votes
Derailed (2016) ဒီနေ့မှာတော့ ကိုရီးယားကောင်းလေးတစ်ကားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကရစေ ဇာတ်လမ်းလေးကတော့……..ဂျင်အီ၊ဂါယောင်း၊ဘွန်ဂီနဲ့ မင်ယောင်းတို့၎ယောက်က သူငယ်ချင်းစုံတွဲတွေဖြစ်သလို အိမ်ကနေထွက်ပြေးလာတဲ့ အိမ်ပြေးလေးတွေလဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းတွေအလစ်သုတ်လိုက်ကားတွေခိုးလိုက် ဆိုင်ကယ်တွေခိုးလိုက် ပြီးရင်ပြန်ရောင်းပြီး တစ်နေ့စာ အခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းနေတဲ့ လူငယ်တွေပါ လူငယ်ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကိုလဲ ခဏခဏရောက်ဖူးပြီး သူငယ်ချင်း၎ယောက စုပေါင်းလေလွင့်နေတဲ့သူတွေပါ တစ်ခါတစ်လေများဆို ဂါယောင်းနဲ့ မင်ယောင်းတို့၂ယောက် ကပြည့်တန်ဆာဟန်ဆောင်ပြီး လာခေါ်တဲ့ဘဲနဲ့မိုတယ်လိုက်သွားပြီးမှ ရေချိုးခန်းထဲဝင်ပြီး အခန်းနံပါတ်ပြော အဲ့အခါ ဘွန်ဂီနဲ့ ဂျင်အီက ဝုန်းဒိုင်းကြဲဝင်လာပြီး ငွေညှစ်တဲ့အထိပါလုပ်ကြပါတယ်။ ပြောရရင် ပိုက်ဆံရဖို့ အကုန်လုပ်တဲ့ ခပ်ဆိုးဆိုး ကလေးတွေပါ ဒါပေမယ့်လဲဂျင်အီက ဂါယောင်းကိုသိပ်ချစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ ဂါယောင်းတစ်ယောက် မတ်တပ်ရပ်နေတုန်း ပြည့်တန်ဆာအထင်နဲ့ လူတစ်ယောက်က လာခေါ်ပါတယ်။ အစကငြင်းပေမယ့် ငွေလိုနေတဲ့ ဂါယောင်းက ထုံးစံအတိုင်း ရွှေ့နေကျအကွက်အတိုင်းလုပ်ဖို့ မိုတယ်လိုက်သွားပါတယ်။ တကယ်က သူ့ကိုလာခေါ်တဲ့သူက ကာရာအိုကေ ဘားပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီး သူ့ဆီမှာလာလုပ်ဖို့ စကားပြောချင်ရုံသက်သက်ပါပဲ ဒါကို ဂျင်အီတို့ကမသိဘဲ ဝုန်းဒိုင်းကြဲဝင်လာ အဲ့လူကြီးကို သမပြီး အဲ့လူကြီး ကားနဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ပါ ယူပြေးပါတော့တယ် နောက်တော့ ဖမ်းမိသွားပြီး ခိုးသွားတဲ့ကား တန်ကြေးပြန်ဆပ်ဖို့ ဂါယောင်းကို သူ့ရဲ့ ကာရာအိုကေဘားမှာ အလုပ်လုပ်စေပါတော့တယ်။ ချစ်သူဂါယောင်းကို ကာရာအိုကေဘားကနေပြန်ရွေးဖို့ ဂျင်အီတစ်ယောက် နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ ကြိုးစားလာရတဲ့အပြင် ဂါယောင်းနဲ့ ဂျင်အီတို့ရဲ့ ရန်သူတော် တစ်ယောက်ပါထောင်ကထွက်လာပြီး သူတို့ကို လိုက်ရှာနေတဲ့အခါ…. ဂျင်အီအဖြစ် Shineeက Min ...
IMDB: 6.2/10 330 votes
Train to Busan Busan ရထားကြီး ထွက်ပါပြီ။ အားလုံး စောင့်မျှော်တောင်းဆိုနေတဲ့ ဒီဇာတ်ကားကို မြန်မာစာတန်းထိုး HD နဲ့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။ ဒီဇာတ်ကားကို အတော်များများတော့ ကြားဖူးနေကြလောက်ပါပြီ။ အများကြီးတော့ ညွှန်းစရာမရှိပါဘူး။ ကိုရီးယားကားတွေထဲမှာတော့ ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ခုပါပဲ။ အလွှာပေါင်းစုံ လူတန်းစားပေါင်းစုံ စိတ်ဓာတ်ပေါင်းစုံနဲ့ လူတွေ ကြောက်မက်ဖွယ် အန္တရာယ်တွေ ကြုံလာတဲ့အချိန်မှာ တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ စရိုက်၊ စိတ်ထားတွေ အပြောင်းအလဲတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ဘ၀တွေကို ကောင်းကောင်းကြီး ပြသသွားတာပါပဲ။ ကြောက်ရွံ့မှု ရဲရင့်မှု ပျော်ရွှင်မှု ကြေကွဲမှု တကိုယ်ကောင်းဆန်မှု စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုတွေကို တနေရာတည်းမှာ စုစည်းခံစားလိုက်ကြပါစို့။
IMDB: 7.5/10 147,351 votes